Qalabka tayada leh ee tayo fiican leh muraayada midab-kala-sameynta midab-kala-sameynta mashiinka
Somali Qalabka tayada leh ee tayo fiican leh muraayada midab-kala-sameynta midab-kala-sameynta mashiinka
dusha sariirta midabkeedu waa midab qurux badan oo qurux badan. Waxaa si weyn loo isticmaalaa beerta, warshad, hudheelka, hudheelka, hoolka bandhigga, fasaxyada, dhismayaasha qadiimiga ah iyo villa casri ah.
Daarfurka mishiinka midab-kala-baxa ee foornada midabaysan ayaa badanaa lagu iibiyaa dalka Ruushka, kgyzstan, Uzawkistan, Bolivia, America iyo dalal kale. Waxay jecel yihiin in lagu foorno saxan midab leh oo foorno leh oo loogu talagalay sariirta guriga.
Saxanka midabka caadiga ah ee foornada leh ka hor inta aan la daabicin gariirku waa 1250mm, isticmaalka maaddada birta loo geliyo birta galbeed ee qalabka wax lagu buufiyo.
Tilmaamaha saxda ah ee foornada saxda ah ee la isku qurxiyo waxaa ka mid ah dekoiler, mashiinka wax lagu sameeyo, nidaamka xakamaynta kombiyuutarka, gadaashka internetka iyo miiska saaran.